Fomba Hahazoana ny Zazavavy ny Finday Maro
Raha efa nihaona tamin’ny tovovavy iray tena tianao, ny fahazoana ny isa an-tariby dia mety ho manan-danja mbola sarotra. Mety ho sahiran-tsaina, fa tsy tokony ho sarotra na be dingana. Ny fomba tsara indrindra mba hahazo zazavavy ny finday maro fotsiny dia ny hatsarany ny hihaino amin’ny alalan’ny resaka, ary mangataka ny namerenana mivantana, raha ny fisorohana fandrika toy tricking azy na nahazo ny namana mba hanao ny asa ho anao. Amin’ny alalan’ny fijanonana tony sy matoky, ianao mety ho vokany tsara. dia wiki toy ny Wikipedia, izay midika hoe maro ny lahatsoratra voasoratra momba an’i madagasikara? Mba hamorona lahatsoratra ity, ny olona, ny sasany tsy mitonona anarana, dia niara-niasa hanova sy hanatsara izany rehefa mandeha ny fotoana. Io lahatsoratra io ihany koa no heverina, fotoana. Raha efa nihaona tamin’ny tovovavy iray tena tianao, ny fahazoana ny isa an-tariby dia mety ho manan-danja mbola sarotra. Mety ho sahiran-tsaina, fa tsy tokony ho sarotra na be dingana. Ny fomba tsara indrindra mba hahazo zazavavy ny finday maro fotsiny dia ny hatsarany ny hihaino amin’ny alalan’ny resaka, ary mangataka ny namerenana mivantana, raha ny fisorohana fandrika toy tricking azy na nahazo ny namana mba hanao ny asa ho anao. Amin’ny alalan’ny fijanonana tony sy matoky, ianao mety ho vokany tsara. Mila miala sasatra eo anatrehanao dia manatona ilay tovovavy. Na raha fantatrao te-hahazo ny maro raha vao mamantatra azy, dia tsy ho afaka hanao izany raha tsy ny vatany voalohany. Dia ho afaka ny heviny raha toa ianao ka sahiran-tsaina avy amin’ny iray kilaometatra sy sasany, ary raha toa ka natahotra, izy dia tsy ho sahiran-tsaina ihany koa, na ianao mety hanaitaitra azy eny. Na dia ara-dalàna mba ho sahiran-tsaina raha toa ianao mahatsiaro matahotra na menatra, ny ankizivavy dia mety manontany tena hoe: ‘Inona no miakatra amin’ny lehilahy io.’ Mety hieritreritra izy fa misy zavatra eny momba anao na raha toa ianao manana ny olon-tsotra raha ny jitters. Tony ny tenanao teo amin’ny fandinihana ny toe-javatra ratsy indrindra. Ny zavatra ratsy indrindra mety hitranga dia ity: tsy hangataka ny isa an-tariby, ary izy dia tsy manome izany ho anareo. Afaka ny ho velona izany.
Raha vao ianao efa nangina teo, tonga ny fotoana mba tonga ny cutie sy crank ny hatsarany. Tsara eo amin’ny masony, tsiky, ary hiakatra ho azy mba hampiseho azy ny zavatra lehibe lehilahy ianao. Raha te-hitandrina ny miresaka, tsy maintsy ho lehibe fahatsapana voalohany haingana araka izay azo atao. Toy izao ny fomba hanaovana izany: matoky. Asehoy azy fa tia izay ianao, fa ianao faly ny zavatra ataonao, ary izay tia ny fivoriana vaovao ny olona. Raha toa izy mihevitra fa tsapanao tsara ny mikasika ny hoe iza ianao, dia ianao hahatsapa tsara ny momba anao koa. Mety ho izy, dia ho faly izy rehefa mahita fa mitady ny azy, Hanome azy rehetra ny saiko. Tsy midika akory izany fa tokony creepily ny mibanjina an ny masony. Izany no midika fa tokony miala ny vatana nanatona azy, hametraka ny telefaonina izy, ka hataoko mahita fa inona hoy izy zava-dehibe ho anao. Raha vao mahazo ny fototra avy an-dalana, toy ny anarana sy ny toerana ianao, dia tokony hanomboka mba hifandray amin’ny vehivavy eo amin’ny lalindalina kokoa. Tsy midika akory izany fa tokony hanontany azy momba ny fiainana filozofia na ny momba ny tena manan-danja traikefa ny fahazazany, fa izany ve midika hoe tokony hifindra lasa ny fampidiran-dresaka. Toy izao ny fomba hanaovana izany: Mangataka ny fanontaniana vitsivitsy momba ny tenany. Tsy hanadihady azy. Mangataka fotsiny momba ny iray tam-po, ny momba ny sarimihetsika izy no hita, na inona izy dia mihevitra ny asany. Aoka hahita izay miahy ny heviny.
Ataovy azo antoka fa ianao samy miresaka momba ny mitovy. Tsy te-hanery azy amin’ny alalan’ny fametrahana fanontaniana be dia be tsy manambara na inona na inona momba ny tenanao, fa tsy tokony mibodo ny resaka na.
Indray mandeha ianao dia manaova ny tsara rapport, manomboka playfully ataovy mahafinaritra azy kely. Raha izy no nanao ny mazava ho azy fa haingon-trano chunky rojo volamena, mihazona azy ka hiteny hoe: ‘Dia tena volamena.’ Midera azy. Tsy milaza azy dia ilay tena vehivavy tsara tarehy ianao efa nahita. Vao hilaza azy izy dia mahagaga mihomehy, na fa ny masony dia manaitra.
Tsy ianao fotsiny
Ataovy azo antoka ny mijanona ho mangatsiaka. Raha vao ianao efa nifindra lasa ny fampidiran-dresaka, ary efa azon’ody azy voalohany, tonga ny fotoana mba hahazo azy toy ny anao ampy mba te-handany fotoana miaraka aminy indray. Dia tsy maintsy mieritreritra fa ianao ilay lehilahy izy no miandry ny rehetra ny fiainanao rehetra izy no mieritreritra, ‘Hey, bandy ity dia mangatsiatsiaka. Tiako kokoa izany.’ Toy izao ny fomba hahazoana azy mba te-hahita anareo indray: Manaova fisainana banter. Mampiseho azy ianao fa te hananihany azy, manana ny hananihany anao, sy hitandrina ny faran’ny maranitra resaka. Raha nilaza zavatra mampihomehy, valiny hiverina amin’ny mampihomehy quip fotsiny fa tsy nihomehy ka nanao hoe, ‘Fa mampihomehy.’ Izany dia maneho aminy fa tsy afaka manao azy raha toa ka hiarahana indray. Manambara zavatra bebe kokoa manokana. Tsy mahazo izany manokana izay manao azy ho tsy mahazo aina fa hilaza aminy ny zavatra izay mahatonga ny fo ketraka kely fotsiny ary mahita fa tsy ianao fotsiny ny rehetra momba ny vazivazy, fa tena manana ny malemy side. Manana ny hanokatra ho anao. Mahia kely kokoa, ary mamporisika azy mba hilaza zavatra momba ny tenany fa izy tsy hilaza fotsiny na iza na iza. Manomboka ny fanorenana ny fifandraisana mafy. izany ianao raha manao izany araka ny tokony ho izy. Raha toa ka misy zavatra avy amin’ny fiandohana avy ny resaka dia tonga indray ianao, dia afaka mandresy lahatra azy amin’ny alalan’ny fanehoana fa tsy hahatsiaro ny zava-drehetra, hoy izy. Tsy miandry zavatra haingana, na ianao very. Fotsiny ianao raha manana ny tena mahafinaritra ny miresaka ny zazavavy, na ianao rehefa mihomehy mafy indrindra, dia tsara raha tokony hanontany. Rehefa tonga ny fotoana izay ny hevitrao, ‘aho rehefa lehibe toy izany fotoana miresaka io zazavavy io fa tsy dia te-manapaka azy io amin’ny alalan’ny fangatahana ny isa an-tariby,’ tokony manontany avy hatrany. Ireto ny roa no fomba tsara indrindra mba hanao izany: Mangataka azy avy. Fa tsy nangataka ny nomeraon-telefaonina, dia anontanio azy avy amin’ny daty. Eo afovoan’ny ny resaka lehibe, dia hiteny amin’izy ireo fotsiny hoe, ‘tsy maintsy mandeha aho, nefa aho dia tena te-hitandrina ny resaka ity ny sakafo na zava-pisotro herinandro manaraka. Tianao.’ Raha milaza izy fa ho toy izany ary amin’ny fotoana io, izy dia tokony avy eo dia tokony hangataka ny maro mba handrindra. Mangataka ny isan’ny mivantana. Raha ny resaka mandeha ihany koa dia afaka miteny hoe, ‘Eh, tena toy ny miresaka aminao. Afaka mahazo ny maro, noho izany dia afaka miresaka foana.’? Ataovy mazava fa ianao mangataka ny maro satria te-hanantona avy indray izany, tsy hoe satria ianao te-handefa azy mampatahotra andinin-teny, na noho ny tsy hahazo maika tsy hahazo zazavavy’ isa finday. Mihetsika araka ny tokony ho izy. Tsy faly ary fenoy ny totohondry any amin’ny rivotra ary niteny hoe: ‘Eny.’ rehefa izy no manome anao ny maro. Hiteny amin’izy ireo fotsiny hoe, ‘mahatahotra, misaotra,’ ary lazao azy ianao miantso azy tsy ho ela. Dia manao veloma sy mandeha eny amin’ny lohany natao avo. Ary raha hoy izy: tsia, mampiaka-tsoroka izany eny ary milaza fa tsy olana izany dia lehibe mba hitsena azy ihany. Raha toa ka toerana iray tena tsara tarehy zazavavy, na fotsiny ny zazavavy izay toa ka mahafatifaty na mahafatifaty izay te hahalala azy tsara kokoa, avy eo tsy handratra haingana mangataka ny maro. Mba hanaovana izany eo amin’ny roa minitra, tsy maintsy manao isaky ny faharoa manisa. Voalohany, ataovy azo antoka izy no mora mandray. Izy mety ho nijoro irery na miaraka amin’ny namana, tsy hirotsaka amin’ny lalina amin’ny resaka na mijery tahaka izy mitady olona. Mandeha ny tovovavy toy ny ianao hanao asa fitoriana. Rehefa dinihina tokoa, anao ireo. Mitodika any amin ny azy, ary lazao azy ny anaranao. Anontanio azy izay ny anarany. Na inona na inona ny anarany, lazao azy tsara ny anarany. Lazao aminy fa tena efa mba handeha fa izay tsy nahalala anao tsy manenina izany raha tsy amin’ny kely indrindra dia ny miezaka mahazo ny maro, noho izany dia afaka mahazo ny mahafantatra azy tsara kokoa amin’ny ho avy. Hilaza hoe: ‘efa tena maniry aho ho afaka hahafantatra anao ankehitriny ary hampiseho anao ny zavatra lehibe lehilahy aho, fa tsy maintsy hahazo ny mandeha. Afaka mahazo ny maro, noho izany dia afaka maka izany taty aoriana.’? Raha izy manome anao ny maro, dia misaotra azy sy ny hoe faly ianao mba hahalala azy. Avy eo dia miala haingana, toy ny tena sahirana. Raha toa izy ka tsy manome izany ho anareo, tahaka ny mihomehy sady miteny hoe, ‘tsy afaka ny hanome tsiny ahy noho ny miezaka.’ Rehefa avy rehetra, vao nitranga ny loza. Mirehareha ny tenanao noho ny fanaovana ezaka. Na dia ny roa minitra fanazaran-mety ho mahomby, ny folo-faharoa drill tsy hatsarany misy zazavavy, na manao ahoana na slick ny hevitrao ianao. Tokony haka fotoana ampy mba hampahafantatra ny tenanao ho amin’ny ankizivavy, ny mangataka ny anarany, sy handefa azy haingana mahita fa ianao no mahafinaritra ny lehilahy izy te-hahita indray. Raha toa ianao mahatsapa ny fahasamihafana eo amin’ny resaka, na ny ankizivavy ny mitandrina nijery manodidina ny trano, mijery ny finday, na dia miezaka ny hanao izay masony miaraka amin’ny namany ka izy hamonjy azy ianao, dia efa hita ny fahafahana. Miala tsiny, buddy. Tsara vintana manaraka ny fotoana. Raha samy miady mafy ianao mba hahita zavatra ho lazaiko, dia tsy mangataka ho azy isa. Nahoana no dia te-hanome azy ny aminao, ka ianao no afaka mipetraka ao amin’ny fahanginana hafahafa kokoa ny sasany fotoana iray hafa? Raha milaza izy fa veloma ianao, ary manomboka mandeha an-tongotra lavitra, aza mangataka ny maro. Raha tiany ianao dia manontany, dia tsy maintsy mitoetra. Ity dia no-brainer. Raha tsy ianao ao amin’ny sekoly ambaratonga faharoa, tsy maintsy hitafy ny zaza lehibe pataloha ary anontanio ny tenanao. Raha toa ka ny namana hangataka ianao, dia jereo saro-kenatra, saro-tahotra, ary tsy ho toy ny tena lehilahy. Raha ny tovovavy mihevitra fa ianao tsy assertive ampy mba hangataka ny isa an-tariby, ahoana no ahafahan izy manantena anao mba hahatonga azy rehefa mandehandeha. Ny olona sasany dia mety mieritreritra fa hevitra tsara ho anao ny hiditra ny zazavavy ary ny miteny hoe: ‘Oay, mitifitra aho, dia afaka mahita ny finday, mampaninona ve ianao raha tsy manome azy ny antso avy amin’ny finday.’ Avy eo, ny ankizivavy dia ara-teknika hanome anao ny maro, ary ianao dia ‘mahita’ ny hoe ny telefaonina no ao am-paosinao. Izy hahita inona ianao ka sy dia mihevitra ny malemy tongotra tsara tarehy, mahazo ny sasany mitombo ny points fa ity iray ity, fa dia azo inoana kokoa fa ny zazavavy dia mihevitra ianareo ireo ihany koa kanosa mba mangataka ny maro ny fomba ara-dalàna. Misy fomba tsara kokoa mba handeha momba izany. Fomba iray izay matetika miasa no manome ny isa voalohany. Raha toa ianao ka mampiasa ny fialan-tsiny toy ny, ‘efa nahazo ny mandeha any amin’ny iray minitra. Ity ny maro raha te-hiantso na lahatsoratra ahy,’ ary avy eo dia miandry azy hanome anao ny azy. Raha izy ny amin’ny lehilahy, izany angamba ny olon-tiany na ny vadiny. Tsy foana ny raharaha, fa mety ho tsara. Mampiasa ny lohany, hijery ny fomba mifandray, ary manapa-kevitra ny zavatra tokony hatao. Aza matahotra ny vao manomboka ny resaka amin’ny ankizivavy iray raha izy irery na miaraka amin’ny olon-kafa na dia ny namany lahy. Raha toa ianao mandeha ho azy sy hilaza zavatra ary manomboka mahazo ny resaka, tsy ho ela dia hampahafantatra anareo. Tsy ho kivy raha toa ny drafitra dia tsy miasa. Arakaraka ny fotoana miezaka mangataka ny tovovavy maro, ny kokoa ianao mba hahazo valiny tsara. Masìna ianao, aza adino ny mijery tsara sy hitafy ny akanjo tsara indrindra raha mikasa eo nangataka ny nomeraon-telefaonina, fa tsy te hanome ny lehilahy ny isan’ny raha fofona ratsy, na hijery misavoritaka. Rehefa miresaka ny ankizivavy tianao, tsy ny adin-tsaina momba izay tokony hiresaka momba. Hiresaka ho azy toy izany koa ianao, dia miresaha amin’ny namana. Milaza ny momba ny tenanao sy ny manontany azy ny momba ny tenany. Anontanio azy avy, ary tsy matahotra ny fandavana. Raha izy no hiteny hoe tsy misy, izy dia tsy mendrika ny fotoana. Miezaha mba hifindra, rehefa mitranga izany
← Italiana mampiaraka toerana maimaim - poana niaraka tamin'ny Italia Lahatsary Mampiaraka
Tena lalao Soeda →